ဘုရားသခင် ဘယ်သူလဲ? Christian Online Magazine MYATMINGALAR
ဘုရားသခင်ဟာ ဘယ်သူဖြစ်သလဲ? ဘုရားသခင်က ဘာနဲ့တူသလဲ?
ကြီးမားတဲ့အကျယ်အဝန်းပမာဏနဲ့ ဆန်းကျယ်တဲ့အနုစိတ်လက်ရာတွေနဲ့ပြည့်နှက်တဲ့ ဒီစကြာဝဠာကြီးကို ဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့ဘုရားသခင်ကို ကျနော်တို့သိနိုင်ပါတယ်။ ဘုရားက သူ့အကြောင်းကိုပြောပြရုံမကပဲ တခြားအရာတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ် ။ သူက ကျွန်တော် သူ့ကိုသိလာနိုင်ဖို့နဲ့ သူနဲ့ အဆက်အသွယ်ရှိလာဖို့အတွက် အမြဲပဲ ဆန္ဒရှိနေတာဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့သူ့ကို သိရုံသိခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲ အတွင်းကျကျ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်နိုင်ပါတယ်။
“ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကား၊ ပညာရှိသောသူသည် မိမိပညာ၌ မဝါကြွားစေနှင့်။ ခွန်အားကြီးသောသူသည် မိမိခွန်အား၌ မဝါကြွားစေနှင့်။ ဥစ္စာရတတ်သောသူသည် မိမိဥစ္စာ၌ မဝါကြွားစေနှင့်။ ဝါကြွားသောသူမည်သည်ကား၊ ငါသည်မြေကြီးပေါ်မှာ ချစ်သနားခြင်း၊ တရားသဖြင့် စီရင်ခြင်း၊ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုပြုသောဘုရားဖြစ်ကြောင်း တည်းဟူသော၊ ငါ့သဘောကို နားလည်ခြင်း၌သာ ဝါကြွားစေ။ ငါသည် ထိုအရာတို့၌မွေ့လျော်သည်ဟု ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏။” (ယေရမိ ၉း၂၃-၂၄)
ဘုရားသခင်က ကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်တဲ့အရာတွေမှာ သူ့ကိုစကားပြောဖို့နဲ့ ချဉ်းကပ်ဖို့ ခေါ်ဖိတ်ပါတယ်။ ကိုယ်နေဟန်ထားတွေ ပြင်ဆင်စုစည်းစရာမလိုပါဘူး။ အိနြေ္ဒကြီးနဲ့ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့နေဖို့မလိုသလို သီသြလော်ဂျီဓမ္မအတွေးအခေါ်အရ မှန်ကန်ဖို့တွေ၊ မြင့်မြတ်ဖို့တွေ မလိုအပ်ပါဘူး။ သူ့ရဲ့ပင်ကို သဘာဝကိုက ကြင်နာတတ်ပြီး သူ့ဆီသွားတဲ့အခါ လက်ခံတတ်ပါတယ်။
“ထာဝရဘုရားသည် ပဌနာပြုသောသူအပေါင်း၊ သစ္စာနှင့်တကွ ပဌနာပြုသောသူအပေါင်းတို့၏ အနီးအပါး၌ ရှိတော်မူ၏။” (ဆာလံ ၁၄၅း၁၈)
သူဟာ တီထွင်မှုစိတ်ကူးဉာဏ်ကောင်း သူဖြစ်ပါတယ်
( ကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်လေသမျှဟာ ရှိရင်းစွဲပစ္စည်းတွေကို အသုံးပြုပြီးလုပ်တာ သို့မဟုတ် ယခင်နည်းတွေပေါ်မှာ အခြေခံတာဖြစ်ပါတယ်။
ဘုရားသခင်ဟာ အရာဝတ္ထုတွေရှိလာအောင် နှုတ်အားဖြင့်မိန့်မြွက်ပြီးဖန်ဆင်းနိုင်စွမ်း ရှိပါတယ်။ နဂါးငွေ့တန်းဂလက်ဆီတွေ၊ ဇီဝပုံစံတွေတင်ဖန်ဆင်းခဲ့ရုံမက၊ ကျနော်တို့ရဲ့ ယနေ့ပြဿနာများကိုပင် ဖြေရှင်းပေးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။
“ငါတို့ဘုရားရှင်သည် ကြီးမြတ်တော်မူ၏။ တန်ခိုးတော်လည်း ကြီး၏။ ဉာဏ်တော်သည် အနန္တဖြစ်၏။” (ဆာလံ ၁၄ရး၅)
“ငါ့ကိုမစခြင်းအကြောင်းသည် ပေါ်ထွက်ရသောတောင်ရိုးသို့ ငါမျှော်ကြည့်၏။ ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကို ဖန်ဆင်းတော်မူသော ထာဝရဘုရားထံတော်မှ၊ ငါ့ကိုမစခြင်းအကြောင်းသည် ပေါ်ထွက်ရ၏။” (ဆာလံ ၁၂၁း၁-၂)
ကျွန်တော်တို့အပြစ်ကျူးလွန်တတ်ပါတယ်။ ဘုရားနည်းလမ်းအစား ကိုယ့်နည်လမ်းနဲ့ကိုယ် ပြုတတ်ကြပါတယ်။ ဒါကို( ဘုရားသခင်က) သူတွေ့မြင်ပြီးသိမှတ်ပါတယ်။ ဘုရားဟာ အဲဒီလိုအပြစ်တွေကို အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့မကြည့်တတ်ပါဘူး။ လူတွေကို သူတို့အပြစ်အတိုင်း အပြစ် ဒဏ်စီရင်ဖို့ပြင်ဆင်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် ဘုရားသခင်ဟာ ခွင့်လွှတ်တတ်တဲ့အတွက် သူနဲ့ဆက်သွယ်မှုပြုတဲ့အချိန်ကစပြီး ကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်လွှတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဘုရားရဲ့သားတော်ယေရှုဟာ ကားတိုင်ပေါ်မှာကျနော်တို့အပြစ်အတွက် အသေခံပေးဆပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ သေခြင်းမှပြန်ရှင်လာပြီး အဲဒီခွင့်လွှတ်ခြင်းတရားကို ကျွန်တော်တို့အား ကမ်းလှမ်းပါတယ်။
“ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်၊ ယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့အဖို့ဖြစ်၍၊ ထိုသူအပေါင်းတို့အပေါ်ရောက်သော ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားသည် ထင်ရှားခဲ့ပြီ။ ခြားနားခြင်းအလျှင်းမရှိ။ … ယေရှုခရစ်ရွေးနှုတ်တော်မူသောအားဖြင့် အဘိုးကိုမပေးဘဲ ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်ကြောင့် ဖြောင့်မတ်ရာသို့ ရောက်ရကြ၏။” (ရောမ ၃း၂၂၊ ၂၄)
သူ့ရဲ့အတွေးအမြင်တွေနဲ့ ခံစားချက်တွေသိစေတတ်တဲ့ မိတ်ဆွေတစ်ယောက်လို ဘုရားသခင်ဟာ သင့်ကို သူ့အကြောင်း ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြောပြပါတယ်။ တမူထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းရှိပြီး သူဟာ အစဉ် ရိုးသားမှန်ကန်ပါတယ်။ သူ့အကြောင်းသူပြောသမျှ သို့မဟုတ် ကျွန်တော်တို့အကြောင်းသူပြောသမျှဟာ ယုံကြည်စိတ်ချဖွယ်သတင်းအချက်အလက်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘုရားသခင်ဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ခံစားချက်တွေ၊ အတွေးအမြင်တွေ၊ သိမြင်နားလည်းခြင်းတွေထက် ပိုစစ်မှန်ပြီးတော့ သူပြောတဲ့အရာမှာ လုံးဝ တိကျမှန်ကန်ပြီး ရိုးသားဖြောင့်မတ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်အတွက်ပြုတဲ့ကတိတိုင်းကို သူ အမှန်ပြုတာဖြစ်ပြီး အပြည့်အဝ အားထားနိုင်ပါတယ်။ သူပြောတဲ့အတိုင်း ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်ပါတယ်။
“နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖွင့်ပြခြင်းသည် အလင်းကိုပေး၍၊ မလိမ္မာသောသူတို့ကို လိမ္မာစေတတ်ပါ၏။ နှုတ်ကပတ်တော်သည် အကျွနု်ပ်ခြေရှေ့မှာ မီးခွက်ဖြစ်၍၊ အကျွနု်ပ်လမ်းခရီးကို လင်းစေပါ၏။” (ဆာလံ ၁၁၉း၁၃၀၊ ၁၀၅)
၁၀၀% အရာရာမှာ အမြဲတမ်း မှန်ကန်ချင်ပါသလား? ဘုရားသခင်က မှန်ကန်တယ်။ သူ့ရဲ့ဉာဏ်ပညာတော်ဟာ အနှိုင်းအဆမဲ့ အနန္တဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ အခြေအနေတစ်ခုခုရဲ့ အခြေခံသဘောတရားတွေကို နားလည်ပြီး အဲဒီအခြေအနေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဖြစ်ရပ်ရာဇဝင်နဲ့ ဖြစ်ပေါ်လာမယ့်အနာဂတ်အခြင်းအရာတွေကအစ သိမြင်နားလည်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့သူ့ကို သတင်းပေးဖို့မလိုဘူး၊ အကြံပြုဖို့မလိုဘူး၊ ဒါမှမဟုတ် မှန်တာကိုလုပ်ဖို့ တိုက်တွန်းစရာမလိုပါဘူး။ သူအလိုလိုလုပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူဟာ အရာရာကိုတတ်နိုင်ပြီး သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေဟာ စင်ကြယ်မွန်မြတ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ သူ့ကိုယုံကြည်စိတ်ချတယ်ဆိုရင် သူ ဘယ်တော့မှအမှားလုပ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ကို ကိုယ်ကျိုးနည်းအောင်မလုပ်ဘူး၊ လှည့်လည်းမလှည့်ဖြားပါဘူး။ အရာတိုင်းမှာ၊ အချိန်တိုင်းမှာ၊ မှန်ကန်တာကိုပဲ လုပ်မယ်ဆိုတာ အပြည့်အဝ ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်ပါတယ်။
“အကယ်စင်စစ် ကိုယ်တော်ကိုမြော်လင့်သောသူတို့သည် ရှက်ကြောက်ခြင်းသို့ မရာက်ရကြပါ။” (ဆာလံ ၂၅း၃)